Bogga ugu weyn Bangiyada ugu Fiican Magaalada Kansas Sanadka 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Ku haysashada lacagtaada mid ka mid ah bangiyada ugu fiican magaalada Kansas waxay bixisaa dulsaar wanaagsan, ikhtiyaarrada maalgashiga, helitaanka amaahda, qiimo dhimis bilaash ah oo ku saabsan badeecadaha iyo adeegyada, iyo waayo -aragnimo macmiil oo la yaab leh.
Guriyeynta in ka badan 146 wakaaladood oo federaal ah iyo tiro aad u badan oo meherado heer caalami ah iyo warshado ah, Kansas City waxay siisaa aura ka sheekeyneysa shaqo adag, qulqul lacag caddaan ah, iyo muruq dhaqaale.
Maqaalkan, waxaan ku qori doonnaa bangiyada ugu fiican Kansas si ay kaaga caawiyaan xulashada ma aha oo kaliya bangiga ugu fiican warqadda laakiin midka macaamiisha siiya adeegyada ugu fiican. Ila joog intaan ku dhex marayo qoraalkan.
Waxaad ku dhex socon kartaa boostada miiska tusmada hoose.
Maxaan Fiiriyaa Markaan Raadinayo Bangiga ugu Fiican Magaalada Kansas?
Hal shay oo ay tahay inaad ogaato ayaa ah in bangi kasta oo ku yaal Magaalada Kansas uu isku dayayo inuu kasbado macmiil, taas oo ku badan dhinaca ganacsiga. Si aad u dooratid bangiyada ugu fiican, fiiri bangiyada bixiya kaydka iyo hubinta faa'iidooyinka iyo arrimo kale sida hoos ku taxan:
Kaararka lacag -bixinta ee ku siinaya lacag -celin marka aad iibsaneyso
La -taliyayaal iyo qalab maareyn maareyn lacag la'aan ah
Heerka CD -ga ayaa kordha marka aad leedahay koonto jeeg ama kayd
Lacag -bixinta macaashka ururada amaahda ee xubnahooda
Barnaamijyo qiimo -dhimis bilaash ah oo ku saabsan badeecadaha iyo adeegyada
Waa Kuwee Bangiyada Ugu Fiican Kansas?
Iyada oo ka weyn 400 bangi oo ku yaal Magaalada Kansas, helitaanka bangiga ugu fiican ee qanciya ma aha oo kaliya dantaada gaarka ah laakiin mid leh sumcad la aqoonsan yahay iyo dabinno soo jiidasho leh waxay u baahan tahay baadi -goob xooggan iyo taxaddar habboon.
Si loo go'aamiyo bangiyada ugu fiican Magaalada Kansas, waxaan tixgelinnay faahfaahinta iyo qodobbada soo socda:
Adeegga macaamiisha ugu fiican
Xisaabaadka bangiyada oo leh xayeysiisyo
deposit Ugu Yar
Waa kan liiskayaga bangiyada ugu fiican magaalada Kansas.
# 1 Bankiga Mareykanka
QIIMEYN: 0.01% APY
NOOCYADA XISAABTA: Kaydinta, Hubinta, CD -yada, iyo Xisaabta Suuqa Lacagta
MIN. XAALADDA: $ 25
Waxaa la aasaasay 1863, bangiga Mareykanka wuxuu ka koray inuu noqdo Bangiga Qaranka ee Cincinnati ilaa Baanka Mareykanka ee maanta. Sanadka 2019, oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 70,000 oo shaqaale ah iyo $ 495 bilyan oo hanti ah, bangigu wuxuu sheegtey booska bangiga shanaad ee ugu weyn Mareykanka.
Iyada oo ay ka go'an tahay in la gaarsiiyo macaamiisha iyo bangiyada ganacsiga, bangiyada shirkadaha iyo ganacsiga, adeegyada lacag bixinta, iyo maaraynta hantida iyo adeegyada maalgashiga, bangigu wuxuu u abuuraa guri macmiil kasta. Waxay u shaqeeyaan sidii shuraako si ay u siiyaan badeecooyin maaliyadeed iyo adeegyo ka dhiga bangi ammaan, fudud, oo ku habboon.
Iyada oo leh shan ikhtiyaar xisaabeed oo jeegga ah iyo shan xirmo xisaabta keydinta, waxaad xor u tahay inaad doorato koonto kugu habboon adiga oo aan la kulmin caqabadda dhigaalka ugu yar. Hal shay oo wanaagsan oo ku saabsan Bangiga U. ayaa ah in koontadiisa jeegga ay kuu oggolaaneyso inaad iska dhaafto khidmadaha bil kasta adiga oo buuxinaya shuruudaha qaarkood sida dheelitirka ugu yar.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Bangiga Mareykanka, waxaad booqan kartaa iyaga website-.
ARAG SIDOO KALE: Sida lacag looga sameeyo Koontadaada Bangiga
#2 Bangiga Ganacsiga
NOOCYADA XISAABTA: Hubinta, Keydinta, CD -yada iyo Xisaabta Suuqa Lacagta
MIN. XAALADDA: $ 0
In ka badan 150 sano oo joogto ah oo joogto ah, Bangiga Ganacsiga wuxuu qiime u keenay macaamiisheeda isagoo dhisaya xiriir macmiil oo xooggan.
Markii xiisadda maaliyadeed ay sababtay hoos -u -dhac ku yimid 2008, Ganacsiga ayaa mar kale sii xoogaystay iyada oo ay ugu wacan tahay dhaqankii aasaasidda ee dareenka. Ganacsiga ayaa ka fogaaday halis rahmadda. In kasta oo bangiyada kale ay codsadeen kicitaan oo ay dawladdu ku kharash garaysay balaayiin si ay kor ugu qaaddo, Ganacsigu wuxuu ahaa bangiga saddexaad ee ugu weyn dalka si uu u diido gargaarka dawladda. (EEG DHEERAALAYAASHA MORTGAGE EE UGU FIICAN EE SHAQAALAHA NAFTA AH)
Bangigan ugu fiican Kansas wuxuu u fidiyaa macaamiisheeda marin u helidda xisaabaadka, xisaabaadka keydinta, CD -yada, iyo xisaabta suuqa lacagta iyadoo mid walba uu bixinayo dano.
In ka badan 45 laamood oo ku yaal Mareykanka, Bangiga Ganacsiga wuxuu bixiyaa astaamaha bangiga onlaynka ah iyo kan guurguura si aad si habboon ugu maamuli karto lacagtaada.
Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan Bangiga Ganacsiga, riix halkan.
#3 Bangiga CIT
QIIMEYN: 0.45% APY
MIN. XAALADDA: $ 100
Haddii aad isku dayeyso inaad lacag u keydiso guri iibso, baro tirooyinkii ugu dambeeyay ee la xiriiray ganacsiga, marin u hel fursadaha maalgashiga, ama kobciso meheraddaada, Bangiga CIT waa mid la aamini karo.
Qeybta bangiyada ganacsiga ee shirkadda waxaa ka mid ah maalgelinta ganacsiga, bangiyada ururka bulshada, bangiyada suuqa dhexe, qalabka iyo maalgelinta iibiyeyaasha, warshadaynta, maalgelinta tareenka, adeegyada khasnadda iyo lacagaha, iyo suuqyada raasumaalka iyo maareynta hantida. Qeybta bangiyada macaamilka ee CIT waxaa ku jira bangiga tooska ah ee qaranka iyo shabakadda laanta gobolka.
Ahaanshaha mid ka mid ah bangiyada ugu fiican Kansas iyo US CIT waxaa lagu dhisay ballanqaad iyo kalsooni si loogu adeego macaamiisheeda. Nidaamkeeda bangiyada dhijitaalka ah ayaa ah kan ugu sarreeya.
Bangiga CIT, kuwa haysta koontada waxay kasban karaan ilaa 0.45% APY marka ugu horreysa ee deebaajiga ah $ 100. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad sii wadato dheelitirka xisaabta ugu yaraan $ 25,000 ama inaad samaysato $ 100 dhigaal bille ah. Haddii aadan awoodin inaad la socoto xeerarkan, dulsaarkaagu wuxuu hoos ugu dhici doonaa 0.29% APY.
Wixii macluumaad dheeraad ah, guji halkan.
#4 Bangiga Keydka Waqooyiga Ameerika
QIIMEYN: 0.10% APY
MIN. XAALADDA: $ 10
Bangiga Kaydka Waqooyiga Ameerika, ama NASB, waa adeeg buuxa, bangi caymis ku jiro FDIC oo fadhigiisu yahay Kansas City, Missouri. Iyada oo haysata hanti ka badan $ 2 bilyan iyo 11 laamood oo ku yaal aagga Magaalada Kansas, NASB waxay bixisaa wax -soo -saarka ugu sarreeya akoonnada dhigaalka.
Wax -soo -saarka ugu sarreeya ee CD -yada, jeegagga iyo xisaabaadka kaydka ayaa ka fiican bangiyada badan laakiin ka yar waxa ay bixiyaan bangiyada internetka qaarkood.
NASB waxay u fiican tahay badbaadiyeyaasha doonaya dammaanad -qaadka waxayna doorbidaan inay lacag ku kaydsadaan kaydinta, hubinta, iyo xisaabaadka suuqa lacagaha leh wax -soo -saar sare iyo helitaanka internetka.
Macaamiishu waxay heli karaan hubinta, kaydinta, CD -yada ama xisaabaadka suuqa lacagta.
Markaad ugu yaraan $ 50 ku shubto Koontada Keydka Kaydka ee Smart Savers, waxaad bilaabi kartaa inaad lacagtaada ku ballaariso APY adag oo ah 0.10%. Lixda bilood ee ugu horreysa lahaanshaha akoonka, waxaad iska ilaalin kartaa lacag bille ah adigoo si fudud u sameysanaya dhigaal soo noqnoqda ugu yaraan $ 25 koontada.
#5 Bangiga BMO Harris
QIIMEYN: 0.05% APY
Kani waa mid ka mid ah koontooyinka jeegga bilaashka ah ee ugu fiican Magaalada Kansas. Iyada oo ay jirto rabitaan ah in la kobciyo wanaagga ganacsiga iyo nolosha, BMO waxay u adeegtaa in ka badan 12 milyan oo macaamiil iyada oo loo marayo saddex kooxood oo isku dhafan oo bixiya bangiyo shaqsiyeed iyo ganacsi, maareyn hanti, iyo adeegyo maalgashi.
Ahaanshaha bangiga 8-aad ee ugu weyn Waqooyiga Ameerika iyo mid ka mid ah bangiyada ugu fiican Kansas, BMO waxay siisaa amaah, qorshayaasha maaraynta hantida, ikhtiyaarada maalgashiga, iyo heerka dulsaarka macaamiisheeda.
Waxaad heli kartaa $ 5 abaalmarin bil kasta haddii aad ku kaydiso $ 200 ama ka badan koontada Keydka Qoraalka Cusub ilaa 12 bilood.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan BMO Harris Bank, guji halkan.
#6 Bangiga Ammaanka ee Kansas
QIIMEYN: 0.15% APY
NOOCYADA XISAABTA: Hubinta, Keydinta, CD -yada, Xisaabta Suuqyada Lacagta
Tan iyo markii la aasaasay 1985, Bangiga Ammaanka ee Kansas wuxuu u koray bangi caan ah oo u adeega baahida bulshada.
Bangiga amniga wuxuu siiyaa macaamiisha marin u helida meel kasta oo bangi, dhigasho aan xad lahayn, iyo amaah dulsaar.
Bangiga Ammaanka ee Magaalada Kansas wuxuu bixiyaa xulasho dhammaystiran oo ah alaabada bangiyada, oo ay ku jiraan xisaabaadka kaydka, hubinta xisaabaadka, xisaabaadka suuqa lacagta, CD -yada, IRA -yada, alaabta amaahda guryaha, iyo kaararka deynta. Haddii aad ka fekereyso koontada jeegga ee isticmaalka maalin kasta, koontada jeegga caadiga ah ee bangigu ma qaado lacag bille ah.
Bangiyada bixiya jeegga bilaashka ah iyo koontada kaydka ee dulsaarka badan ayaa ah sharadkaaga ugu wanaagsan ee lagu kasbado dakhliga ugu badan ee dhigaalkaaga iyadoo la joogtaynayo helitaanka lacagtaada.
Sida laga soo xigtay SmartAsset, Bangiga Amniga ee Magaalada Kansas wuxuu leeyahay heerka kaydka ah ee 0.15%, kaas oo cadaalad ah marka loo eego celceliska qaranka.
CD-ga halka sano ah waxa uu kasbadaa 0.45% halka CD-ga shanta sano ah uu kasbado 1.15%, halka koontada suuqa lacagta ee waxsoosaarka badan ay ka hesho APY 0.65%. Iyadoo la eegayo heerka kaydka aan tartanka lahayn, tixgeli inaad doorato xisaabaadka kaydka ee dakhli-sare ee bangiyada kale.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Bangiga Ammaanka ee Magaalada Kansas riix halkan.
#7 Bangiga Ameerika
QIIMEYN: 0.25% APY
NOOCYADA XISAABTA: Hubinta, Keydinta, iyo CD -yada
Bank of America Corp. waa shirkad bangi iyo maaliyadeed haysata oo bixisa adeegyo maaliyadeed oo bangi iyo bangi. Ahaanshaha mid ka mid ah bangiyada ugu wanaagsan magaalada Kansas, Bank of American City waxay bixisaa Bangiga Macaamilka, Hantida Caalamiga ah iyo Maareynta Maalgashiga, Bangiyada Caalamiga ah, Suuqyada Caalamka, iyo dhammaan kuwa kale.
Bangiga Ameerika, hadafka ururku waa inuu gacan ka geysto hagaajinta nolosha maaliyadeed iyada oo loo marayo awoodda xiriir kasta.
Bank of America waxay la iftiimaysaa waayo-aragnimo bangi oo online ah oo cajiib ah iyo qalab dhijitaal ah. Naqshadaynta degelku waa run, macluumaadka ku saabsan khidmadaha iyo qiimayaashana way fududahay in la helo.
App-ka mobaylka, waxa aad ku shubi kartaa jeegag, biilal, lacag diri kartaa, la socon kartaa dhaqdhaqaaqa, iyo baaqiga akoontiga oo waxaad isticmaali kartaa kaaliyaha farsamada, Erica. Isticmaalayaasha taleefoonada Android iyo iOS waxay siiyeen barnaamijka bangiga dhibco sare.
Sida laga soo xigtay Bankrate, Bank of America waxaa aasaasay Talyaani, Amadeo Peter Giannini sanadkii 1904 si uu u taageero muhaajiriinta aan hay'adaha maaliyadeed ee kale u adeegayn.
#8 Bangiga UMB
QIIMEYN: 0.08% APY
MIN. DEEQAHA: $ 100
Bangiga UMB wuxuu joogitaan ka ahaa Galbeedka -Galbeedka illaa 1913 -kii, isagoo markii ugu horraysay u adeegayey muwaadiniinta Magaalada Kansas sidii bangi dukaan. Maanta, bangigu wuxuu bixiyaa koonto kayd ah iyo hubinta ikhtiyaarrada koontada, iyo sidoo kale dhowr shahaadooyin oo dhigaal (CD -yada).
Bangiga 9aad ee ku jira liiska bangiyada ugu fiican Kansas waa UMB Bank. Bangiga UMB, bangi -shaqsiyeedku wuxuu ka dhigayaa mid aan kala go 'lahayn - koontada deynta koontada keydka, CD -yada maalgelinta, iyo xulashooyinka maareynta maalka.
UMB waxay kaa caawineysaa inaad maamusho lacagtaada, la kulanto yoolalkaaga maaliyadeed iyo inaad u keydiso lacag baahiyahaaga shaqsiyeed sidoo kale qaado qorshayaasha maalgashiga.
Bangiga UMB wuxuu bixiyaa kaadhka deynta iyo alaabada amaahda shakhsi ahaaneed ee heerar tartan ah.
View ah website Wixii macluumaad dheeraad ah.
#9 Bangiga Arvest
QIIMEYN: 0.55% APY
NOOCYADA XISAABTA: Hubinta, Keydinta, CD -yada, iyo Xisaabta Suuqa Lacagta
Bangiga Arvest waa bangi goboleed oo siiya macaamiil ku sugan Arkansas, Kansas, Oklahoma, iyo Missouri qiimayaal dhexdhexaad ah iyo khidmado xisaabaadkiisa. Waxay bixisaa xisaabaadka suuqa lacagta, xisaabaadka kaydka, shahaadooyinka deebaajiga, iyo xisaabaadka hubinta.
Bangiga Arvest waa mid ka mid ah bangiyada ugu wanaagsan Magaalada Kansas oo bixiya qiimeyn aad u sarreeya dhammaan dheelitirka oo leh APY ah 0.55%. In kasta oo bangiyada qaarkood ay bixiyaan APYs ka sarreeya dhigashada in ka badan $ 100,000 ama xaalado gaar ah waan hubaa inaad ogtahay inay taasi aad u sarrayso.
Iyada oo leh in ka badan 275 laamood oo dalka oo dhan ah, bangiga Arvest wuxuu siiyaa macaamiisheeda adeegyada ugu fiican. Macaamiisha ayaa sidoo kale marin u leh barnaamijka mobilada halkaas oo ay ku bartaan aaladaha sida aaladaha miisaaniyadda, aaladaha maalgashiga, iyo wax badan oo dhan.
Waxaad booqan kartaa mareegaha bangiga wixii faahfaahin dheeraad ah.
Halkan waxaa ah liiska bangiyada ugu fiican Magaalada Kansas, noocyada xisaabaadka, dhigaalka ugu yar, iyo APY-yada.
1. Bangiga Maraykanka 0.01% APY Kaydinta, Hubinta, CD -yada, Xisaabta Suuqa Lacagta $ 25
2. BANKII Ganacsiga 0.01% APY Hubinta, Keydinta, CD -yada, iyo Xisaabta Suuqa Lacagta $0
3. Bangiga CIT 0.45% APY Hubinta, Keydinta, CD -yada, iyo Xisaabta Suuqa Lacagta $ 100
4. Bangiga Kaydka ee Waqooyiga Ameerika 0.10% APY Hubinta, Keydinta, CD -yada, iyo Xisaabta Suuqa Lacagta $ 10
5. Bangiga BMO Harris 0.05% APY Hubinta, Keydinta, CD -yada, iyo Xisaabta Suuqa Lacagta $ 25
6. Bangiga Ammaanka ee Kansas 0.15% APY Hubinta, Keydinta, CD -yada, Xisaabta Suuqyada Lacagta $ 100
7. Bangiga Magaalada Ameerika 0.25% APY Hubinta, Keydinta, iyo CD -yada $0
8. Bangiga UMB 0.08% APY Hubinta, Keydinta, iyo CD -yada $ 100
9. Bangiga Arvest 0.55% APY Hubinta, Keydinta, CD -yada, iyo Xisaabta Suuqa Lacagta $ 100
Smartasset.com - Bangiyada ugu Fiican Magaalada Kansas
kansascity.bloggerlocal.com - Top 10 Bangiyada Magaalada Kansas ee ugu Fiican
qiimeepenguin.com - Bangiyada ugu Fiican Magaalada Kansas
Bangiyada ugu Fiican North Carolina NC 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Bangiyada ugu Fiican Pittsburgh Sanadkii 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Bangiyada ugu Fiican Atlanta Georgia Sanadka 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Sida Loo Bilaabo Ganacsiga Sawir Qaadista 2022 | Hagaha Buuxa
10 Dukaan ee ugu Fiican Online -ka ee 2022
Chennai waxaa hore loogu yiqiin magac kale: Madras. Waa caasimadda Tamil Nadu,…
Lacag La Si Si Aad U Hesho CDL -kaaga: Sida Uu U Shaqeeyo | Tababarka CDL
Ciwaanka leh, 'Lacag ku Qaado Si aad CDL-gaaga u hesho', waxaan hubaa in aad la yaabi doonto oo aad u haminayso inaad...
Miisaaniyadda Is -dhaafsiga ee ugu Fiican Kanada 2022/Tusaha Khabiirka.
Maalgashigu had iyo jeer waa mid aan degganeyn oo aan la saadaalin karin, sababtaas awgeed dad badan ayaa ka baqa inay maalgashadaan…
50 -ka Sare ee Hindiya Lagu Sameeyay ee Viral -ka Galay | 2022
Sida rasmiga ah loogu yeero Jamhuuriyadda Hindiya, Hindiya waa waddan ku yaal Koonfurta Aasiya. Waa dalka labaad ee ugu dadka badan,…